Home News Kulankii Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo shaki laga muujinaayo!!
Kulankii Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo shaki laga muujinaayo!!
Madaxweynaha Soomaaliya Max’ed C/llaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga wadanka Kenya ayaa kulamo la leh madaxda sare ee dalkaas.
Booqashada Madaxweynaha oo aheyd mid lama filaan ah ayaa waxaa hareeyey su’aalo badan oo la xiriira danaha labada dal gaar ahaan Kenya oo mudooyinkan si weyn ugu soo dhowaaneysay siyaasad ahaan dowlada Somalia.
Ilo diblomaasiyadeed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha ay qotonto labo arrimood oo kala ah, ka qeyb galka kulamo lagu dhexdexaadinayo Madaxweyne Farmaajo iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ee dhaliilsan siyaasadiisa.
Dowlada Kenya ayaa isku dayeysa iney is faham ka dhex abuurto labada dhinac, waxaana magaalada Nairobi jooga qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada sida Axmed Madoobe, Shariif Xasan iyo kuwo kale.
Ujeedada labaad ee booqashada Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa ah sida warar hoose oo lagu kalsoon yahay sheegayaan iney kala xaajoodaan Kenya fulinta qodob ay wadato oo ku saabsan in dowladu ka tanaasusho dacwada badda ee taalla Maxkamada caalamiga ah ee ICG, taas bedelkeedna ay labada dhinac wadahadal ku dhameystaan muranka badda.
Warar ayaa sheegaya in madaxda dowladu qeyb ahaan ay aqbaleen qodobkaas, waxaana dib loo dhigayaa dacwada Badda oo mar kale la filayey iney ka furanto Maxkamada caalamiga ah ee magaalada Hegue 18-ka bisha fooda nagu soo heysa ee Jun.
Qareenada Soomaaliya ku metelayey dacwadan ayaa laga soo xigtay in lagu wargeliyey iney howlahooda hakiyaan illaa amar dambe, waxaana wadahadalka arintan laga galayo garwadeen ka ah dowlada Norwey oo galaangal badan ku leh shidaalka laga qodayo dhul badeedka lagu muransan yahay.
Haddii arirmahan ay dhab noqdaan waxay noqon doontaa dhabarjab ku yimaada dedaalkii loogu jiray in gacanta shacabka Soomaaliyed lagu soo celiyo dhul badeedka Kenya ay sheeganeyso, iyadoo arintan ay horseedi doonta dhaawac weyn oo soo gaara kalsoonida shacabku ku qabaan Xukumada nabad iyo nolol.